Zuzuru Kusvira mwana wechikoro nyoro 20.09.2021 20.09.2021 Comments
Machemedzero andakaita twuvana kwechikoro nemboro
Zi News 24 — Kusvira Mwana weChikoro after ndamudyisa mboro
Comments BY Mr. Nyaya yeku teacher kumaruzevhawo futi iyi. Vamwe vanokuti kumapfanya. Apa unenge uchangobva ku college; kana wakaita seni uchangobva ku University, apa basa harisi kutamba, wongoti regai ndiende ku teaching ndikwanise kuzvichengetawo. Ndini uyo ndasvika pachikoro pandai teacher. Mazuva ekutanga zvebasa zvaifamba zvakanaka zvazvo, asi nyaya yebonde iyi yakanetsa zvekuti ndakasvika pakuti regai ndimboendawo ku church yanga iri pedyo, pamwe ndingawana kamusikana kandingapfimba.
Ku church kwacho kwanga kwakazara, zvekuti handina kana kumbowona kuti ndeupi wandingaita take take. Waingonzwa kuti mhoro Sir, maswera sei, makadiiko Sir. Ndaitoita kubvunza chaiko kuti koi we ndiwe ani. Ndakazoti regai ndiende zvangu kuma shops kunove ndiko kwaizouya tusikana kuzofara. Ndakasvika zvangu paneimwe bar, asi vaitengesa grocery futi. Ndofunga ndiwo ma general dealer acho here, hameno. Ndakatenga zvangu ka pint, ndokutanga kunwa.
Ndobva vamwe mai ndokuti nhai mwanangu zvowonwa wega. Ndikati munonweiko nhai mhai. Ndkabva ndavatengera Scud ravaida, ndobva vaenda zvavo. Koi we ndiwe unonzi ani. Takataura zvakawanda asi chakandinetsa ndechekuti anga asingavhunduki, and anga asingataridzi kuti mwana wechikoro. To cut the long story short ndakamutengera drink tikabvumirana kuti aizouya ku office kwangu ne mangwana acho Monday nekuti ndaive ndisingabvumi kuti musikana aipinda chikoro.
Akasvika Monday yacho ndokuuya ku office kwangu. Ndakatanga kumuwona neziso reruchiva chairwo. Ma bhatani eblouse acho aiburidza zamu mbichana, apa ranga rakatsvikira zvisingaiti. Ndakangomuti ndikakuudza zvandaida kukudza nezuro zvinoperera muno handiti ka. Ndotokuda zvaunowona kudai.
Hamuwoni kuti ndiri mwana wechikoro here. Plus zvikabatwa topinda tight tose. Unganetsekerana ne uniform iyoyi. Kamwe kaiiti chingoshinga, hapana chinoitika nekuti izvozvi pamwe haasi mhandara ipapa uchitotya. Handina time yakawanda yekuramba ndichikunyenga because vanhu panze vanozotanga kufungira. Chitoita pachikuru. Kana usingadi zveshuwa iribho.
Asi kana uchida chingobvuma because handizokudaidzi futi kuno ku office. Ndakaziva kuti zvaita. Ndakabva ndangobata garo ndiye kiss pamuromo ndoo. Patience anga ari musikana ane 19 years. Mazamu anga akapihwa hake mwana iyeye. Chinhu chaanga ainacho yanga iri face nemazamu. Magaro aive average zvemwanawo wechikoro.
Ndakawona Patience sekuti aigona kutoita mudzimai wangu chaiko. Nekufamba kwenguva mai vake vaingoti vakasangana neni vototarisira scud. Ndaitenga zvakadaro asi handina kumboita nharo.
Chakazoitika ndechekuti vakandidaidza kumba kwavo, zvikanzi mwanangu huya uwone pamusha. Ndakaenda zvangu asi Patience anga asiko. Takabva tatoita kaukama zvekuti mamwe ma ticha na Head vaive vava kutoziva kuti vana Patience ihama dzangu.
Zvakabva zvaita kuti akwanise kusvika ku cottage kumba kwangu pasina kana dambudziko. Mumwe musi ndakanyepedzera kurwara ndikarega kuenda kubasa. Patience akauya kumba kuzondiwona.
Ndaive zvangu ne one room. Akagara pa corner ye bed, ndokubva zvangu ndamuka kwava kutanga kubata mwana wevanhu ari mu uniform. Guys chinhu chinonzi uniform chakaipa. Ndainzwa kuti ropa rangu rava kupisa rakatarisira kukwira mwana uyu.
Ndakatanga kumu kisser, iye ndokudzorerawo kiss iya. She was no that much of a kisser though, but aizama zvake zvezera rake. Ndakatanga kubvisa blouse ne braa. Zamu racho chete raita kuti utunde chete. Ndakaribata kudai, ranga richakawomerera asi arimahombe. Ndakataga kumayamwa, apa mwana achingoyuwira chete. Ndakatanga kubvisa skirt, apa iye ndokubviza short rangu, asi akatya kubata pant.
Ndakabva ndamutora kumuisa pakati pe bed. Ndakabata pant ndokuisa paside, kwava kutangisa kutambisa beche rake ranga ratota zvaro. Ndaiisa chigunwe mukati ndichiita kakukwenya so, ndikanzwa bhuuuuuuu kusura. Ndokubva abata kumeso, apa ini kana kumbomira, ndakawona mwana woyuwira, zvikanzi isai kani. Ndakada kuseka, but ndakazowona kuti arikunyara dningazomukanganisa akamuda mu mood. Ndakaipfekera kudai, pasina kana minute, munhu akatanga kubvunda achigwinha gwinha.
Ndikati ko, akati kwaiva kutotunda. Ndikati nechemumoyo mwana hausati wainzwa. Ndakatanga kuirova zvakaipa mwana achichemerera. Ndakatanga ne missionary chaiyo ndokupinda doggy ndokuzorova yekupeta makumbo.
Ndaingoti akagwinha gwinha, ndoziva kuti kutunda, ndochinja style. Ndakazoti ndamupeta makumbo manje, ndaiita kubaya chibereko chaicho. Aive ongoti chiregai zvakwana. Ndakabva ndanzwa kuti ndava kuda kutunda ndokuwedzera kupomba beche riya, ndiye tsaaa tsaaa, apa ndichibowa sebhuru chairo. Apa iye aive oda kutunda, ndokubva andikiya musana kudai kuti irambe irimo.
Ndakada kumboti wandikuvadza ndikawona kuti ndinosekwa regai ndingoshinga. Ndakazonzwa kubvunda ndiye munhu avakutanga kugwinha, ndikaziva kuti zvaita. Takati tapedza ndokurara pa bed takamirira kuita imwe round.
Ndichiti regai nditange kubata Patience kuti ndichirova round yechi two, ndakanzwa nock pa door, ndokuwona aaah inga ishamwari ya Patience yainzi Ruva yauya kuzondiwona. Ndakabva ndaudza Patience akati rega ndipinde mu wardrobe because yaivawo hombe. Akabva apinda, ini ndikashevedzera kuti mira ndirikuuya. Ndakazovhura door, akapinda mumba mangu. Ndakabva ndamuudza kuti ndiri right zvangu.
Asi makaroora. Wait for part 2 munzwe zvakazoitika Subscribe to Blog via Email Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email. Email Address Do you have a story to tell us? Email drsviro gmail.
Max Ndini hangu ndainge ndapinda basa rechipurisa muKadoma, ndichigara hangu patuma bachelor cottage twaive kuseri kweprison yaiva mutown next to the hospital. Semunhu aigara pedyo nechikoro ichi chaingoendwa nevana vevanhu vane mari chete nevarungu painge paine maSalad chaiyo. Neumwe musi I was off hangu walking around town ndikasangana nekamwe kamusikana, mwana ainge akanaka iyeye zvainwisa mvura.
Takatanga kutaura hedu nezveupenyu and school so ndakamuudza kuti ndaiva mupurisa and she was happy to hear that. Imi vana vechikoro musikanzwa I am sure kumba kwavo Angie aigara akavharirwa mudurawall.
We agreed to meet the next day and this time we met close to the school gate and semunhu aiva in uniform yebasa people did not suspect anything vaingofunga kuti mupurisa is just having a conversation nevana vechikoro.
Angie was with her friends and they were all in form 6. Angie called her parents achiti achauya kumba late achiti she was going to study at school. This was all a lie ndakaenda naye to my cottage, imi I did not know kuti vana ava always want to experiment especially kana ropa rakunyanyo mhanya mumuviri wavo. Takasvika tikapinda mumba and no one was around since most people vainge vaenda kumabasa.
Hatina kana kuda kupedza nguva coz i wanted kudzokera kubasa, Angie akabvisa uniform and akatanga kundibata bata and then mboro yangu haina kana kutora nguva kumuka apa raiva rino zimboro. Since Angie was just a school girl beche rake was very tight apa aida kuita zveainge awona papono and it seems like she was really up for it.
Ini manje ndaitya kuti rape mwana wechikoro. Angie akatanga kundidya mboro inini ndichipuruzira beche rake apa rainge ratota kare, ndakabva ndamubatisa bed ndikatanga kumusvira nekumashure, mwana akaridza mhere zvekuti dai vanhu vaive around someone would have come knock on my door to ask.
Aingoti aaaaaahhhh maiweeeee kaaaaannnii , ndikada kuburitsa mboro obva ati iwe svirisa kani usaburitse zvirikunaka kani maaaiiiihwwwweeee nhasi ndofa nemboro iweee kani. Tapedza ndakamira for a while Angie akatanga kubuda mumba, I followed a few minutes ndichimhanya then we caught up and i walked her home. Uyu ainzi Nyarai akabva ati ndirikuda kuti undichemedze kupfuura zvawakaita Angie.
Ndakaita kunge munhu ashamisika but hey pane murume angarambe here kusvira iye apihwa mahara. When i tried to tell Angie kuti shamwari yake came to me , she already knew and she said I know Nyarai arikuda kuti umusvirewo. Nyarai akauya apa aiva nemazigaro, akapfupika imi ka imi, munogonzwa imi. Nyarai aiita kunge aiiziva zvaaiita more than Angie ndakapotsa ndatunda ndisati ndasvira nekuti she was good kushandisa rurimi rwake.
Ndakazoti ndakumubata bata aiita kuridza mhere zveshuwa apa ndisati ndambosvira kana kuisa pamuromo zvapo. Aiita masounds aya emunhu ari papono achingoti aaaahhhhhhh mmmmmm aaaahhhhh. Takasvirana kwe almost 30mins then akuenda akabva ati Stella is coming to visit you tomorrow , ndikati heeee zvikanzi you heard me ….
Ndainge ndakutya kuti vana ava varikudei so ndakambotanga kuvatiza asi mumwe musi I was off ndiripamba hangu ndikaona vana vasvika in their school uniforms, when they realised I was home vakangosiya Stella vakabva vayenda…. Zvakazoiita na Stella ndichakuudza next week… Source — NhauDzevakuru.
Kana usingadi zveshuwa iribho. Asi kana uchida chingobvuma because handizokudaidzi futi kuno ku office. Ndakaziva kuti zvaita. Ndakabva ndangobata garo ndiye kiss pamuromo ndoo. Patience anga ari musikana ane 19 years. Mazamu anga akapihwa hake mwana iyeye. Chinhu chaanga ainacho yanga iri face nemazamu. Magaro aive average zvemwanawo wechikoro. Ndakawona Patience sekuti aigona kutoita mudzimai wangu chaiko. Nekufamba kwenguva mai vake vaingoti vakasangana neni vototarisira scud.
Ndaitenga zvakadaro asi handina kumboita nharo. Chakazoitika ndechekuti vakandidaidza kumba kwavo, zvikanzi mwanangu huya uwone pamusha. Ndakaenda zvangu asi Patience anga asiko.
Takabva tatoita kaukama zvekuti mamwe ma ticha na Head vaive vava kutoziva kuti vana Patience ihama dzangu. Zvakabva zvaita kuti akwanise kusvika ku cottage kumba kwangu pasina kana dambudziko. Mumwe musi ndakanyepedzera kurwara ndikarega kuenda kubasa. Patience akauya kumba kuzondiwona. Ndaive zvangu ne one room. Akagara pa corner ye bed, ndokubva zvangu ndamuka kwava kutanga kubata mwana wevanhu ari mu uniform.
Guys chinhu chinonzi uniform chakaipa. Ndainzwa kuti ropa rangu rava kupisa rakatarisira kukwira mwana uyu. Ndakatanga kumu kisser, iye ndokudzorerawo kiss iya. She was no that much of a kisser though, but aizama zvake zvezera rake. Ndakatanga kubvisa blouse ne braa. Zamu racho chete raita kuti utunde chete. Ndakaribata kudai, ranga richakawomerera asi arimahombe. Ndakataga kumayamwa, apa mwana achingoyuwira chete. Ndakatanga kubvisa skirt, apa iye ndokubviza short rangu, asi akatya kubata pant.
Ndakabva ndamutora kumuisa pakati pe bed. Ndakabata pant ndokuisa paside, kwava kutangisa kutambisa beche rake ranga ratota zvaro. Ndaiisa chigunwe mukati ndichiita kakukwenya so, ndikanzwa bhuuuuuuu kusura.
Ndokubva abata kumeso, apa ini kana kumbomira, ndakawona mwana woyuwira, zvikanzi isai kani. Ndakada kuseka, but ndakazowona kuti arikunyara dningazomukanganisa akamuda mu mood. Ndakaipfekera kudai, pasina kana minute, munhu akatanga kubvunda achigwinha gwinha. Ndikati ko, akati kwaiva kutotunda.
Ndikati nechemumoyo mwana hausati wainzwa. Ndakatanga kuirova zvakaipa mwana achichemerera. Ndakatanga ne missionary chaiyo ndokupinda doggy ndokuzorova yekupeta makumbo. Ndaingoti akagwinha gwinha, ndoziva kuti kutunda, ndochinja style. Ndakazoti ndamupeta makumbo manje, ndaiita kubaya chibereko chaicho.
Aive ongoti chiregai zvakwana. Ndakabva ndanzwa kuti ndava kuda kutunda ndokuwedzera kupomba beche riya, ndiye tsaaa tsaaa, apa ndichibowa sebhuru chairo. Semunhu aigara pedyo nechikoro ichi chaingoendwa nevana vevanhu vane mari chete nevarungu painge paine maSalad chaiyo. Neumwe musi I was off hangu walking around town ndikasangana nekamwe kamusikana, mwana ainge akanaka iyeye zvainwisa mvura.
Takatanga kutaura hedu nezveupenyu and school so ndakamuudza kuti ndaiva mupurisa and she was happy to hear that. Imi vana vechikoro musikanzwa I am sure kumba kwavo Angie aigara akavharirwa mudurawall. We agreed to meet the next day and this time we met close to the school gate and semunhu aiva in uniform yebasa people did not suspect anything vaingofunga kuti mupurisa is just having a conversation nevana vechikoro.
Angie was with her friends and they were all in form 6. Angie called her parents achiti achauya kumba late achiti she was going to study at school. This was all a lie ndakaenda naye to my cottage, imi I did not know kuti vana ava always want to experiment especially kana ropa rakunyanyo mhanya mumuviri wavo.
Takasvika tikapinda mumba and no one was around since most people vainge vaenda kumabasa.
Hatina kana kuda kupedza nguva coz i wanted kudzokera kubasa, Angie akabvisa uniform and akatanga kundibata bata and then mboro yangu haina kana kutora nguva kumuka apa raiva rino zimboro. Since Angie was just a school girl beche rake was very tight apa aida kuita zveainge awona papono and it seems like she was really up for it. Ini manje ndaitya kuti rape mwana wechikoro.
Angie akatanga kundidya mboro inini ndichipuruzira beche rake apa rainge ratota kare, ndakabva ndamubatisa bed ndikatanga kumusvira nekumashure, mwana akaridza mhere zvekuti dai vanhu vaive around someone would have come knock on my door to ask.
Kleem mantra experience
thoughts on “Kusvira mwana wechikoro nyoro”
24.09.2021 at 19:40
26.09.2021 at 15:34
Mooguramar on Kusvira mwana wechikoro nyoro
Copyright © 2021 Kusvira mwana wechikoro nyoro. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.